Esemokwu ya na igwefoto LG V30 nwere nkọwa dị mfe | Gam akporosis
LG V30 enwetawo ihe dị egwu site na ịmalite igwefoto foto nwere oghere kachasị ukwuu n'ụwa. Agbanyeghị, ụbọchị ole na ole, ọ dị ka ọhaneze.
Ekwuputara LG V30 na IFA 2017, ebe anyị hụkwara ya iji kọọrọ gị nke anyị akpa echiche. Wezụga ya imewe, nke bụ eziokwu bụ na LG V30 anya mma karịa ihe ọ bụla ọzọ mobile ebi mere site LG. N'agbanyeghị ụdị nkọwa ya dị oke mkpa, emepụtara onye nrụpụta ahụ site na ikwe igwefoto ka mma karịa ka ọ dị n'ezie.
Kpọmkwem, ekwentị na-etinye a Anya 16-megapixel nwere oghere f / 1.6 yana oghere 13-megapixel nke abụọ na f / 1.9. Ihe dị mkpa ebe a abụghị mkpebi, kama ọ bụ imeghe diaphragm ahụ, nke na-enye ohere ịde foto ka mma na ọnọdụ abalị. Ihe ndị nrụpụta ndị ọzọ rụpụtara nke kachasị, dịka Samsung, bụ oghere nke f / 1.7. Ka o sina dị, o juru onye ọ bụla anya na ihe LG rụzuru ruo mgbe ezigara ọtụtụ nyocha na webụ.
Na nnọkọ Ndị na-emepụta XDA nkọwa akọwapụtara LG na EXIF data nke foto were ekwentị, na abụọ dị iche iche na ọnụ ọgụgụ: f / 1.69 na f / 1.99 (na PC). Na mberede, LG V30 kwụsịrị ịbụ mkpanaka nrọ maka ndị na-ese foto, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ kwuru nkwupụta gọọmentị iji kọwaa ihe kpatara mkpanaka ahụ na-eweta dị ka ekwere na mbụ.
LG V30 egosiri na IFA 2017 ma dị tupu mpụta akwụkwọ gọọmentị na ahịa enweghị ụdị ikpeazụ nke sistemụ arụmọrụ nke a ga-enyefekwa ndị ọrụ. Maka ihe dị iche iche, nke a abụghị ihe ọhụrụ. N'ihe banyere nlele ndị enyere maka nyocha nke mbido, ọtụtụ ndị na-arụpụta ngwaọrụ (laptọọpụ, mbadamba, mobiles na ngwaọrụ ndị ọzọ) rịọ ndị mgbasa ozi ka ha ghara ịnwale ule na igwe okwu ndị a ruo mgbe ha nwetara ikpeazụ software update. Dabere na LG, hotara site 9 ruo 5googleNke a bụ kpọmkwem ihe mere na V30, nke nwere oghere f / 1.6, ọ bụ ezie na egosighi uru ọ bara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Esemokwu ya na igwefoto LG V30 nwere nkọwa dị mfe
Nke a bụ ihe ọhụrụ Xiaomi Mi A1 dị ọcha na gam akporo